Xalka - AOOD Technology Limited
La Xiriirka Farsamada
Teknolojiyadda xiriirka caadiga ah ee AOOD waxaa lagu sameeyaa iyadoo lala xiriirayo xadhko gaar ah oo fiilooyin burush ah iyo koox tabin ama goob lagu rakibay usheeda dhexe. Waxay leedahay awood ka sarraysa, calaamad iyo awood wareejinta xogta, gaar ahaan dahabka ku -xirriirka dahabka wuxuu la tacaali karaa signalada daciifka ah ama gudbinta xogta xawaaraha sare wuxuuna ilaaliyaa isku halaynta sare. Qalinka ku -xiridda lacagta ayaa dabooli kara baahida ujeeddada qiimaha hoose ee gudbinta awoodda la isku haleyn karo.
Teknolojiyadda aan lala xiriirin
Baadhitaanka CT -ga, wuxuu u baahan yahay giraan silbasho leh oo leh dalool weyn si loo hubiyo wareejinta qiimaha xogta sare ee ka shaqaynaya xawaaraha sare. Injineerada AOOD waxay horumariyaan tikniyoolajiyadda gudbinta ee aan la xiriirin codsiyadaan. Wareegyada siibashada ee aan lala xiriirin waxay bixiyaan awood xawaare sare leh ama wareejin xog oo aan lahayn wax dayactir iyo cimri dheer oo adeeg ah marka loo eego burushyada caadiga ah ee la xiriiraya siddooyinkii kabaha.
Teknolojiyadda cusub ee roogagga cusub ee AOOD waxay hirgelisaa siddooyinkii rogaal-celinta si ay u xaqiijiso waxqabadka wareejinta ee giraanta silbashada, oo adeegsata siddooyin naxaas guga ah oo dahaadhay oo ku yaal meel u dhexaysa laba jeexitaan bir ah oo qaali ah halkii ay ka ahaan lahayd xiriir dhaqaaqa. Waxay leedahay iska caabin hoose oo la xiriirta, xirashada hoose, buuqa elektiroonigga ah oo hooseeya, cimri dheer iyo awoodda wareejinta ee hadda ka sarreysa. Waa xalka giraanta sibidhka kaamilka ah ee nidaamyadaasi u baahan yihiin cabbir aad u weyn, awood sare oo hadda jirta iyo siddooyinkii silsiladda cimriga dheer. AOOD-ring ringing xiriirinta siddooyinkii silsiladda waxay fulinayaan shaqadooda ugu fiican xagga caafimaadka, difaaca, aerospace iyo codsiyada maraakiibta.
Mercury Liquid ah
Soodhadhka meerkurida meerkuriga AOOD waxay isticmaalaan barkad meerkuriga dareeraha ah oo si kelli ah ugu xiran xiriirrada halkii laga heli lahaa taabashada burush dhaqameedka caadiga ah. Mabda 'xiriirkooda gaarka ah waxay xaqiijinayaan inay ku hayn karaan iska caabin hooseysa iyo xiriir aad u xasilloon marka la eego xawaaraha shaqada ee aadka u sarreeya, waxayna awood u leeyihiin inay u wareejiyaan ilaa 10000A hadda halkii tiirba. Inta ugu badan AOOD siddooyinkii siigada meerkuriga ee meerkuriga waxaa loo isticmaalaa mashiinnada alxanka.
Gudbinta Fiber Optic waxay ku dhalatay heerka xogta ugu sarreysa. Farsamada Fiber Optic -ga AOOD waxay xaqiijin kartaa ilaa 10 Gbit/s heerka xogta xitaa marka la joogo deegaanno aad u daran. AOOD goysyada Rotary fiber optic waxaa lagu dhisay jidh biraha ka samaysan iyo ilaa ilaalinta IP68, waxaa loo adeegsan karaa ku dhawaad ​​nooc kasta oo ka mid ah codsiyada laga helo qalabka caafimaadka, ROV -yada ilaa raadarada ilaalada milatariga. Gudbinta Fiber Optic waxaa lagu dari karaa silsilado simbiriirixan leh oo xiriirinaya siibisyada baahida loo qabo hababka siddo isku-dhafan ee korontada ku shaqeeya.
AOOD waxay bixisaa xalka gudbinta soo noqnoqoshada sare ee u dhexeeya goob go'an iyo madal wareegsan, sida kamaradaha TV -ga, gawaarida aan duuliyaha lahayn iyo nidaamyada raadaarka. AOOD waxay u oggolaaneysaa gudbinta signalada inta jeer ee u dhexeysa DC ilaa 20GHz, isku -xirka wareegga HF waxaa lagu dari karaa giraanta silsiladda korantada haddii loo baahdo.
Ururka Rotary Media
AOOD waxay bixisaa xalalka gudbinta warbaahineed iyada oo dareeraha ama gaasta laga soo wareejiyo il go'an loona wareejiyo il wareegsan iyadoo la oggolaanayo guuritaanka. Ururada warbaahineed ee warbaahinta waxaa loo adeegsadaa codsiyo kala duwan laga bilaabo jadwalka tilmaamidda garaaca wareegsan ilaa mandrels ka shaqaynaya biraha ilaa qalabka kaymaha ee Haydarooliga. Giraan silbasho ah, isku -xidhka Rotary fiber optic, HF rotary joint and encoder ayaa lagu dari karaa nidaamka midowga Rotary. Haddii aad u baahan tahay xalal gaar ah oo loogu talagalay cadaadiska sarreeya, xawaaraha shaqada ee sarreeya ama mugga qulqulka sare, kaliya la dagaallama AOOD.